Samachar Batika || News from Nepal » आज २०७६ चैत २१ गते शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस
आज २०७६ चैत २१ गते शुक्रबार। ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? हेरौ आजको राशिफल:
रि’सलाई बसमा राख्नु बुद्धिमतापूर्ण हुनेछ । आँटेको र ता’केको कार्य पूरा होला । बोलीको प्रभाव पनि बढ्नेछ । यात्रामा सा’वधानी अपनाउनु पर्नेछ ।
अधुरो काम पूरा हनेछ । वैदेशिक कार्य अघि बढ्नेछ । मौनता अपनाउनु राम्रो । पारिवारिक क’लहको सम्भावना छ, शान्त रहनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
जो’खिमपूर्ण चु’नौतीको सा’मना गर्दा तपाईलाई आज शुभ हुने योग छ । केही कुरा बोल्नु अगाडि विचार गर्नुहोला, तपाइका साथी र आफन्तलाई ठे’स पुग्न सक्छ ।
केही कुरा बोल्नु अगाडि विचार गर्नुहोला । केटा तथा केटी साथीबाटा टाढा रहनुहोला । मनमा चि’न्ता । धार्मिक यात्राबाट आनन्दी ।
जग्गा खरिद विक्रीका लागि तपाईको आजको दिन शुभ हुनेछ । नाक तथा घाँटीमा समस्या आउला । मनमा प्रशन्नता । पारिवारिक क’लह ।
धार्मिक यात्राको योग । मनमा शान्ति मिल्नेछ। दाम्पत्य जीवन सुखमय हुनेछ । आर्थिक क्षेत्रमा सफलता मिल्ला । स्वास्थ्यमा ग’डबढी ।
अधिकार प्राप्तिका लागि सं’घर्श गर्नु पर्ला । महत्वपूर्ण अवसर गु’म्न सक्छ । पारिवारिक क’लहको सम्भावना छ, शान्त रहनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ । धार्मिक कार्य सफल रहनेछ । प्रेम सम्बन्ध क’सिलो होला । आज तपाईका लागि रमाइलो दिन छ ।
महत्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्नेछ । राजनैतिक कार्यमा बा’धा आउनेछ । नजिकको व्यक्तिबाट धो’का पाइन सक्नेछ सचे’त रहनुहोला ।
राजनैतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । दिनको उत्तरार्ध सुखद् रहनेछ । निर्णयमा अडिक रहनुस् ।
आज २०७६ चैत २१ गते शुक्रबार। ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ त भनेर हामीले माथी हेरीसक्यौ आजको राशिफल:
प्रकाशित मिति २१ चैत्र २०७६, शुक्रबार ००:२०